I-TV yeFire Stick iya kuvumela iAmazon ukuba ikhuphisane neApple TV kaApple | Ndisuka mac
Kwiveki nje edlulileyo, iAmazon yathengisa ukuba yintoni enokuba yintloko yokwenyani yeApple TV. El I-TV Stick Stick , ngokubanzi, yindlela yokufikelela ngokulula nangokukhululekileyo kwihlabathi elibanzi lomxholo wedijithali.
I-59,99 € kuphela (kukwazisa ngentengiso yabasebenzisi beNkulumbuso nge- € 39,99), "Ixabiso eliphantsi" umhlobo weApple TV ungena kukhuphiswano oluqale kwiminyaka embalwa edlulileyo.
I-TV Stick Stick ibonelela ngokufikelela ngokulula kuwo onke amaqonga omxholo wokumamela nokuva, nge INetflix, HBO, Youtube, kwaye ngaphezulu kwe-4000 yezicelo kunye nemidlalo. Ngale ndlela, ngonxibelelwano lwe-USB nje, sinokonwabela ii-movie zethu esizithandayo kunye noluhlu.
Kwakhona, ngoncedo lwendawo ekude (ekucacileyo ukuba ngumzamo wokukopa leyo isetyenziswa yiApple TV) Sinokulawula ngokulula imenyu kunye nokusetyenziswa okuhlukeneyo okuhambelana nale nkonzo.
Amazon zama ngesi sixhobo sitsha ukuba ungene ngokupheleleyo kwintengiso. Abasebenzisi bokuqala bentonga basixelela ukuba iyayifeza injongo yayo kwaye ixabiso lentengo lemveliso lihle kakhulu.
Ngokucacileyo, sonke siyazazi izibonelelo ezinikezelwa yiApple TV, ukusuka kwimidlalo eyilelwe kuphela ukudlala nolawulo oluyiyo, ukusebenzisana noSiri, kodwa Siyazi nendleko zayo eziphezulu, kunye nabantu abafuna kuphela ukubona iimuvi zabo abazithandayo kunye noluhlu, mhlawumbi ixabiso lingagqithisa.
Njengoko uGoogle wayekhe wenza ngemveliso efanayo, ahora Amazon ujoyina eli thambeka liya lisetyenziswa kakubi kwaye apho iinkampani ezinkulu zizama ukuseka imveliso engenayo nje eyayo ilawulayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Fire TV Stick iya kuvumela iAmazon ukuba ikhuphisane neApple TV kaApple
I-Apple yeNetflix iyakubona ukukhanya kosuku kunyaka olandelayo